Izifundo kunye namaqhinga okufunda ukulungisa kunye nokulungisa zonke iintlobo zezinto- Ikkaro
yokuqalisa >> Ukulungiswa
Ngexesha elidlulileyo ndifunde umntu owathi:
Utata undifundisile ukuba akufuneki sibe neentloni ngokwaphula izinto kodwa ngokungazi ukuba sizilungisa njani.
Kwaye kuyinyani. Kwaye ndicinga ukuba ibhlog ifanelwe licandelo lokulungisa apho ndizama ukunceda abantu ukulungisa zonke iintlobo zezinto ukusuka kwimicrowave ukuya kwi-playmobil.
Ayisiyiyo yonke into eyaphukileyo elektroniki. Into yokudlala elula, iqhekeza leplastikhi linokulungiswa kwaye mhlawumbi alikho lula njengoko kubonakala ngathi asazi ukuba zisebenza njani na izixhobo okanye ukuba asazi ukuba siyivula njani.
Ndikucebisa ukuba ujonge ewe okanye ewe kuqokelelo lwe abenzi kunye nokulungiswa kubonakala senze ntoni
Siza kubona ntoni
Zonke iintlobo zolungiso onokuzenza okanye uzichaze. Njengoko benditshilo kungekuphela nje izixhobo zasendlini. kodwa ezinye izinto ezinokubonakala zilula ngamanye amaxesha.
Siza kuzama ukubona iimpawu okanye indlela yokuchonga iingxaki nendlela esinokuthi sizisombulule ngayo.
Lungisa uphinde usebenzise kwakhona. Siza kudla kancinci kwaye sandise ubomi bezinto zethu.
Uyenza njani into yokubuyisela umgca wenayiloni ngexabiso eliphantsi kwi-Bosch brushcutters
Oku akukodwa ukulungiswa, kodwa yinto encinci yokugcina imali. Izinto zokugcina zikaBosch zibiza kakhulu kwaye kweli nqaku ndiza kukubonisa Ungawusebenzisa njani umgca wenayiloni ovela kwezinye iimveliso kwi-Bosch cutter brush cutters.
Ndinomsiki webrashi yombane IBosch AFS 23-37 I-1000 W yamandla. Kuhamba kakuhle. Ndonwabe kakhulu kukusetyenziswa okungafunekiyo njengale ndiyifunayo. Isisixhobo sebrashi yombane, hayi ibhetri, kufuneka idityaniswe nombane ukuze usebenze.
Nangona kunjalo, Izinto ezisetyenziswayo ze-nyon ze-brand ziyabiza kakhulu, kubiza kakhulu kwaye kuyenziwa ukuze ugqibe ukusebenzisa izixhobo zayo. Kule meko, umsonto wenayiloni uza nohlobo lwebholiti embindini othintela ukuba ungabaleki.
Ndiyaqhubeka ne Ukulungiswa kwePC kunye negajethi nangona oku kungenako ukuthathwa njengokulungiswa. Kodwa yinto ethi qho xa bendibuza ngaphezulu. Beka ezinye indlela yokusebenza ebenza basebenze kwiikhompyuter ngezixhobo ezindala okanye ezindala.
Kwaye nangona ndikuxelela kancinci ngezigqibo endizenzileyo kule meko, inokwandiswa kakhulu. Ndizakuzama ukuhlaziya kwaye ndishiye into endiyenzileyo qho xa kunikezelwa ityala.
Landela uthotho lwamanqaku ngokulungiswa kwekhompyuter. Izinto eziqhelekileyo umntu anokuzilungisa endlwini yethu xa ikhompyutha ivuliwe kodwa awuboni nto kwiscreen.
Ndisebenzisa ithuba le Umjikelo wokulungisa ii-mobiles Ndenza ukuchaza nokurekhoda amanyathelo amaninzi abahlobo kunye nosapho bahlala bebuza kum. Kule meko ndiyacacisa Ungazifaka njani usetyenziso lwe-APK kwi-Android.
Ndiya ngqo kwinqanaba, ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni i-APK kwaye ungadinga ukuyifaka nini, yiya esiphelweni senqaku.
Kwimeko yam Ndiza kufaka iVenkile yokudlala esebenza kakubi Kwiselfowuni esiza kuyisebenzisa ngaphandle kweSIM ukuba utata womkhwe ayidlale. Andikwazi ukuyivula, nditsho nokuseta kwakhona umzi-mveliso kwaye kuyakhawuleza kakhulu kum ukufaka usetyenziso ngokuthe ngqo kunokuba ndibone ukuba kwenzeka ntoni kwi-smartphone okanye ndiyikhanyise.
Kule nqaku yokulungisa siza kubona njani vula iselfowuni esaphukileyo isikrini ukufikelela kwi-hard drive kwaye ukwazi ukudlulisa nokubuyisa iifayile, imifanekiso kunye neevidiyo. Ngexesha elithile eladlulayo umfazi wam wayilahla ifowuni kwi-BQ Aquaris E5 kwaye isikrini sakhe saphuka, kubonakala ngathi asiyonyani, kodwa emazantsi ayisebenzi. Ungayibona, kodwa awukwazi ukuyisebenzisa. Kwaye nantsi ingxaki. Asikwazanga ukuvula iselfowuni, kuba indawo yepateni ayiphenduli ekuchukumisweni. Kwaye asinakho ukufikelela kwihard drive kwaye sithathe iifoto kunye neevidiyo ezizigcinileyo.
Ndijonge iindlela ezininzi ukuze ndikwazi ukuthatha iifoto. Guqula iscreen, uninzi lwesoftware eyaphula iipateni kunye nendlela ekhethiweyo, intambo ye-OTG, Ukutshintsha iscreen kule meko yayiyeyona nto ibiza kakhulu, kuba ukubuyiselwa kwayo kwakungabizi kwaye kuba iselfowuni yayineminyaka yayo sagqiba ekubeni tshintsha entsha. Ndizama ukuqokelela ulwazi kweli nqaku kwaye ndishiya ividiyo ndisebenzisa intambo ye-OTG.
Abenzi, ukulungiswa kunye nokubonakaliswa kwe-DIY
Bendintywila phakathi kwezona zikhulu Kubonakaliswa kwi-DIY, Ukuzilungisa ngokwakho, abenzi, endiyifumene kwi-Intanethi. Imibono emininzi iphakanyisiwe malunga namalungelo ethu njengabathengi kwaye kuncinci malunga noxanduva lwethu noxanduva lwethu. Isihloko esisondelelene nokuphelelwa lixesha okudumileyo
Ukuba awukwazi ukuyilungisa, ayisiyakho
Zindala noko, ziphantse zaba zezodidi kodwa zinomdla. Ndinayo kuyilo ixesha elide kwaye ndicinga ukuba inyathelo lifanelwe yindawo e-Ikkaro.
Ukunikezelwa kwezi manifesto Sisiqalo sokubonakalisa njengoko senditshilo ngamalungelo, uxanduva noxanduva esinalo njengabathengi. Awunyanzelekanga ukuba uthathe nantoni na ngokungakhathali, nokuba kukho into evela kwiwebhusayithi enedumela, awunyanzelekanga ukuba uvume. Kuya kufuneka ukhulise ukucinga okunzulu. Ngaba ndiyavumelana noko ikutshoyo? Ngaba ngokwenene kulungile? Indinceda njani njengomthengi, abanye abathengi, iplanethi? Ngubani lo wenzakalisayo? Kukho imibuzo emininzi ekufuneka sizibuze yona kwaye kufuneka sinxibelelane neenqobo ezisesikweni, indlela yokuziphatha.
Ukuzilungisa ngokwakho kwi-iFixit.com
Uyilungisa njani iteyiphu yekhasethi
Ndiyifumene iikhasethi zam ezindala, uninzi lunomculo kwaye uninzi lunamabali neengoma zabantwana. Kwaye ndisebenzisa ithuba lokuba i-Clio isenayo irediyo yekhasethi, ndifuna ukubeka iiteyiphu ezimbalwa ukuze intombi yam ibone ukuba iyazithanda na. Ndiyaxolisa kakhulu ngokuba ndibalahle.
Kodwa ezininzi zaphukile, itheyiphu ikrazukile. Ke ndiza kuchaza ukuba zilungiswe njani, njengerhafu, kuba andicingi ukuba baninzi abantu abanomdla wokuzilungisa, kodwa ukuba omnye uwela ezandleni zakho kwaye ufuna ukubanakho ukumamela, mhlawumbi ungeno luya kuba luncedo kuwe.
Indlela yokusika ikhadi leSIM kwi-SIM encinci ukuya kwi-sim encinci kunye nano sim
Ndifumana eyam I-Google Nexus 4. Ndizakuyizama kwaye ndiqonde ukuba iyayisebenzisa i-SIM encinci :-(
Isisombululo esisengqiqweni kukuya Impinda yeSIM khadi, kodwa bahlawulisa i-5 Euro (ewe, yayisimahla ngaphambili) ke kuya kufuneka ujonge isisombululo esenziwe ekhaya kwaye oku kuyaqhubeka Sika ikhadi ekhaya ukuguqula iSIM encinci ibe yiMicrosoft SIM.
Ewe ndiyazi ukuba emva kokuchitha i-300 euros kwiselfowuni, i-raking ye-5 ayibonakali ngathi ininzi, kodwa oku kube yinto yobuqu.
Uhlaziyo: Kule mihla amakhadi asikiweyo eza ngaphambili, ke kulula kakhulu ukutshintsha ukusuka kubungakanani ukuya kwenye. Kodwa ukuba unayo i-SIM endala eli qhinga lisaza kukusebenzela. Ukuba uyayigcina i- € 5, yiba nekofu empilweni yam
Ewe, ngaphambi kokuba sinqumle ngokungathi siyaphambana, kancinci malunga Ikhadi leSIM